Tokinao | Martsa 2011
"Mpino & Darwin" # "Tsy mpino & darwin"
Salama daholo o!
Mba hanoratra indray aho anio. Tsy izany fa izao : nisy lahatsoratry ny namana iray izay tatsy novakiako satria nahaliana ahy. Dia avy eo novaliako. Dia avey eo ... hitako ho tsara tehiriziko ny zavatra nosoratako.
Ho vokatr'izany dia : tsaratsara raha vakianareo aloa (eny fa na dia ambangovangony fotsiny aza) ilay lahatsoratr'olona atsy :NY TSY MPINO SY I DARWIN Ary avy eo ianareo vao miverina mamaky eto, raha hamaky . Satria (indramiko ny tenin'izay olona iray izay hoe) : tsy natao loatra hovakian'olona no tanjoko, fa kosa ny hanana arsivan'ny zavatra noeritreretiko. Ny fanatsarana zavatra mivaingana mantsy dia tsy maintsy mianga amin'ny eritreritra. Raha tsy misy ny eritreritra dia tsy misy fanovàna sy fanatanterahana.
Rehefa novakianareo moa ilay lahatsoratra etsy ambony, dia izao no fijeriko (eto ambany eto ... dia miresaka amin'ilay mpiblaogy nanoratra ilay lahatsoratra aho) :
Tiako mihitsy ity lahatsoratrao ity satria milaza ny zavatra mba nanitikitika ny saiko hatry ny ela, sady milaza koa ny zavatra efa saika lazaiko.
Raha tsorina, dia efa ela koa aho no saika hanakiana an'ilay fomba fijerintsika gasy izay azo atao hoe : donton'ny fivavahana (izay manamarina ilay hoe : religion, opium du peuple. maherihery ihany io fiteny io, ka mangataka ny mpamaky aho mba hamaky hatramin'ny farany). Betsaka ny itovizantsika hevitra (ankoatran'izay ho lazaiko etsy ambany). Ny mba tsikaritro dia ity : betsaka ny malagasy no tsy mahay mandray ny fivavahana : lasa vato misakana amin'ny lafiny rehetra ilay izy matetika. Ohatra fotsiny :
- eo @ fomba fiakanjo, sy fihetsika : misy ny fomba fiakanjo lazaina fa tsy maontina ara-pivavahana. Ny marina anefa dia ny saina no tsy mahatanty ilay zavatra. (ny fiakanjo sexy no teneniko eto. Heverina manko matetika fa mpivaro-tena ihany no mpanao ireny).
- eo @ lafiny ara-politika, sy fiaraha-monina (tsy asiako ohatra eto satria tsy te hiresaka politika aho aloha).
- eo amin'ny resaka siantifika : indraindray dia lasa vato misakana tsy ahatakarana zavatra ilay finoana (zonareo ny tsy hitovy hevitra amiko amin'ity). Ohatra fotsiny : izaho manokana dia mahita fa mifanaraka tsara ny lazain'ny genesisy na genezy sy i Darwin. Jereo ange ilay filaharan'ny fipoiran'ny zava-manan'aina e : ny trondro aloha, izay vao ny vorona, izay vao ny biby an-tanety, ary farany ny olombelona: samy milaza an'io na i darwin na ny baiboly (jereo ny an'ny katolika na koa protestà). Fa ny mahasamihafa azy fotsiny dia ny fomba filazan-javatra : ny genesisy somary misarin'angano, fa ny iray kosa siantifika. (Mamaky an'ity zao ny olona sasany dia mety hilaza fa siansa koa ny finoana, na koa hoe : ny finoana dia ambony noho ny siansa rehetra. Ny hevitro amin'io dia aleoko tsy teneniko eto satria : ho lasa lava ny fanazavana. Ny azoko tenenina angaha dia ny hoe : sasanangy samihafa ireo, ka tsy azo ampitahaina, ary tsy mifanimba. Andriamanitra no nanome saina antsika hahay siansa). Ny matetika mpitranga dia : vao maheno fotsiny ny mpivavaka sasany hoe : "avy amin'ny gidro ny olona", tonga dia manidy ny varavaran-tsainy, satria mifanohitra amin'ilay hoe : "natao ho tahaka an'Andriamanitra isika". Ho ahy manokana dia ny fandraisako ny an'i Darwin dia hoe : ny gidro no nisy taloha, izay vao ny olona. Fa ny fomba nipoiran'ny olona kosa indray dia, avelako io ho misiterin'Andriamanitra. Mety ho nataony, "par mutation" haingana na miadam-piova (aman-tapitrisan-taonany), mety ho nataony niforona amin'ny alalan'ny tsy misy (io dia inoako fa hain'Atra, satria na ny olombelona aza dia nahita fa afaka mamboly mikroba avy amin'ny mololo : tamin'ny nahitàna ny mikroba voalohany. Mety ho nataon'Atra ho avy amin'ny reaction chimique-na matière minerales koa. Tsy voazavako io "partie fiforonan'olombelona io" no tena marina ka ao no ametrahaka ny finoana.
Ity "finoana lasa vato misakana" ity moa dia efa mpitranga hatramin'izay naha-tany ny tany. Fony faha-moyen age, dia tsy navelan'ny fivavahana (fa fady hono) ny mianatra ny ao anatin'ny fatin'olona. Izany dia nahatonga ny olona tsy hahay fitsaboana, sns. Taloha ela be koa dia fady ny izao sy izatsy raha tsy izany dia ilatsahan'ny andriamanitra "varatra", sns.
Ary izaho manokana dia mbola mieritreritra fa betsaka ny azo kianina amin'ny fomba fampiasantsika olombelona (izany hoe ny malagasy koa) ny resaka "finoana" ankehitriny. Ho sarotra amin'ny olona anefa ny hahatakatra izany satria : efa zatra an'ilay zavatra ilay olona, ary teraka tao anatin'izany fahazarana izany. Io no tahaka ilay tantaran'ny olona iray teraka tao anaty lava-bato, ary mbola tsy nivoaka tao : tsy fantany hoe anaty maizina izy satria mbola tsy nahita ny mazava (eto koa dia aza malaky mitsara ny mpamaky sasany hoe : ampitahaiko amin'ny haizina ny finoana. Tsy izany velively). Ny tiako tenenina dia ny hoe : tsy ho hain'ny olona iray velively ny hitsara ny tenany raha mbola tsy nahita ny hafa izy, na koa : tsy afaka atao mihitsy ny hamaritra ny zavatra iray raha tsy efa misy "reference, na koa répère".
Hiverina amin'ny resaka Darwin sy Andriamanitra aho. Izaho dia "mino" fa samy marina ireo. (Ampiako fotsiny hoe : mety somary hisy diso ny an'i Darwin, ary ny hoe :mety ho "imagée" ny an'Atra, ary koa "notsotsorina" mba ho takatry ny olombelona. Eto indray dia aza tenenin'ny sasany aho fa hoe manompo Andriamanitra 2. Tsy izany fa izao : ny iray Andriamanitro, ary ny iray Théorie. Heveriko fa ny théorie dia inoana na ekena no filaza azy satria tsy nisy vavolombelona nanatrika izany).
Tohizako ny resako : mitovy ireo hoy aho. Ny Genezy fotsiny no somary endrik'angano. Ary hitako ho rariny izany satria : ataon'ny olombelona fahiny ahoana moa no hahazo ny resak'Andriamanitra raha toa ka nataony ara-tsiantifika izany. tsy ho azon'ny olona mihitsy. Ary na dia ankehitriny aza, dia tsy ho azontsika olombelona mihitsy ny resak'Andriamanitra raha ataony fanazavana siantifika. Bitika sy kely ny fahaizan'olombelona na dia amin'izao fotoana izao aza (ampitahao fotsiny ny angezan'ny olona iray, sy ireo kintana aman-tapitrisany : na ny lalànan'ny kintana iray aza tsy voafehintsika) : izany fahabitihan'ny fahalalantsika izany anefa dia tsy takatry ny saintsika, satria efa zatra niaina tao isika. Eny, mety ho heverintsika ho goavana be aza isika satria ny tenantsika ihany no hitantsika hatramin'ny naha-isika antsika. Toy ilay olona ao anaty lava-bato maizina : na dia ao anaty maizina aza izy dia heveriko fa mety hanana ny "notion"-na hazavana ihany : ohatra hoe : heveriny ho hazavan'ny masoandro ny fanjelatry ny vaingam-pasika kely iray monja.
Raha fintinina dia izao :
- Ekeko tokoa ilay fijery hoe : tsara ny mifanaja fomba fijery, sy tsy malaky manakiana. Eny fa na dia ny hevitra mifanipaka tanteraka @'ny an'ny tena aza.
- Izaho manokana dia mino an'Atra, nefa koa dia manaiky sy manaja ireo hafa finoana rehetra, hatramin'ny tsy mino koa. Ary maniry aho mba hiparitaka izany fijery izany.
Mety tsy hazava ny resako satria filozofika, nefa ... io no mba takatro hanazavàna azy.
Misaotra indrindra e!
Misaotra anareo mametraka fanakianana momba ity fijeriko ity (Eny fa na dia ny tsipelina, filazan-kevitra aza). Ny teny ratsy ihany no aza apetraka llooll.
PS : Aleo azavaiko fohy ilay hoe "donton'ny fivavahana", na koa ilay hoe "religion, opium du peuple" sao tsy mazava. Tsy sanatria ny fivavahana akory no hitako ho mahadonto, fa isika indraindray no manadonto ny saintsika. Ary tsy ny fivavahana akory no drogue, fa isika no lasa mandray azy ho "drogue". Aleo nazavaiko tsara io ... sao heverin'ny olona ho mpaniratsira fivavahana aho.
Tsy ny fivavahana no toheriko, fa ny fomba sasany hanarahana azy.
Raha nahaliana anao ity dia jereo koa ange ato e : How Darwinism and Faith Can Coexist
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (7) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)